မင်းကိုနိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Win Paw Maung's thoughts
>Cartoon Aw Pi Kye - Politics is for all but not all for politics ...
Posts Tagged ‘ မင်းကိုနိုင် ’
ရှစ်လေးလုံးမှာကတည်းက ဘာမှမဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် Myanmar NOW – အင်တာဗျူး။ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၈ ၁၉၆၂ မတ်လ တွင် ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဦးဆောင်သော စစ်တပ်က ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းကာ...
မင်းကိုနိုင် – ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ခံစားနာကျင်နေရမည့်ကလေးတွေအတွက် မနှစ်ကရေးတဲ့စာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ သားနှင့်သမီးရေ … စာမေးပွဲ မအောင်လို့အသက်ကို အလွယ်စွန့်ခဲ့ရသူတွေ ရှိသလို ၊ အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မွေးပြီး...
မင်းကိုနိုင် – “နောက်တန်း အစွန်လူ”
မင်းကိုနိုင် – “နောက်တန်း အစွန်လူ” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်က ယူပါတယ်) ဟိုနေ့က အမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲတစ်ခု သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ဗိုလ်လုကြတယ်။ အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ဆိုတော့...
Art – Than Htay Maung မင်းကိုနိုင် – တရားတဲ့ဝါဒ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇လေဆိပ်မှာသေနတ်သံကြား ပြည်တော်ပြန်တယောက် သွေးအိုင်ထဲလဲကျသွားတာ ဖိလစ်ပိုင်မှာလည်းရှိခဲ့တာပဲ အမိမြေကိုပြန်ခြေချစ အကွီနိုကို လုပ်ကြံခဲ့သူသမ္မတမားကို့စ်ဟာ...
မင်းကိုနိုင် – ပြေးခဲ့ပါ ကလေး
မင်းကိုနိုင် – ပြေးခဲ့ပါ ကလေး (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) ။ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ ပြေးခဲ့ပါ ကလေး ထမင်းတလုပ် တုတ်တချက်နဲ့ဝေးရာ မင်းကို ညှင်းမည့်လက်တွေ တုပ်မည့်ကြိုးတွေနဲ့ဝေးရာ ခြံဝင်းအပြင်မှာ...
မင်းကိုနိုင် – နွားကြီး… သေသွားပြီ !!!
မင်းကိုနိုင် – နွားကြီး… သေသွားပြီ !!! (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ မြက်ပင်တွေတောင်၊ ခေါင်းမထောင်ခင် နေ၀င်လေအေး၊ မိုးလေးညိုယုံ ချည်တိုင်ကို လွမ်းတတ်တဲ့ နွားကြီး… သေသွားပြီ . သခင်မ...
မင်းကိုနိုင် – အိုးဝေလို့ ထ တွန်တဲ့ နေ့
မင်းကိုနိုင် – အိုးဝေလို့ ထ တွန်တဲ့ နေ့ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅ ဒီနေ့ဟာ သူရဲကောင်းတို့အရိုးတွေ အိုးဝေ လို့ ထတွန်တဲ့နေ့ ...
မင်းကိုနိုင် အင်တာဗျူး ကောက်နုတ်ချက် – NLD ၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပြည်သူလူထု (ဇာနီကြီး)၊ မိုးမခ ၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ (ယခင်အပတ် RFA အင်တာဗျူးကနေ ကူးယူ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါတယ်) ၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်...
မင်းကိုနိုင် – 🐝ယင်ကောင်🐝
မင်းကိုနိုင် – 🐝ယင်ကောင်🐝 (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ကမ္ဘာကျော် ကိုင်ရို ရေမြောင်းထဲ သေရတာကို မရယ်ရက်ဖူး အမေ . ထပ်တရာပန်းလေးတွေ ရနံ့မကောင်းရှာတာ ကြောင်ရုပ်ဆိုးလေးကို… မွေးချင်သူ...
မင်းကိုနိုင် – “ မွေးနေ့လက်ဆောင် ”
မင်းကိုနိုင် – “ မွေးနေ့လက်ဆောင် ” (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ . ဘတ်ဒေးကိတ် ဘယ်ဆိုင်က မှာရမလဲ မေးတဲ့အခါ ကျောင်းထဲ သပိတ်ကာလ လှည်းတန်းဈေးက...
မင်းကိုနိုင် – “ အမေ့ တမ်းချင်း ”
မင်းကိုနိုင် – “ အမေ့ တမ်းချင်း ” (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ မနေ့က အမေ့မွေးနေ့။ မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့မောင်နှမ လေးယောက် အမေ့အိမ်မှာ ဆုံကြဖို့...
မင်းကိုနိုင် – “ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြီး စန္ဒယားတီးနေပြန်ပြီ ”
မင်းကိုနိုင် – “ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြီး စန္ဒယားတီးနေပြန်ပြီ ” (မင်းကိုနိုင် ဖေ့စ်ဘွတ် )(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ဒီမြေ တကြော ပေါလိုက်ပါတဲ့ နတ်ရုပ်တွေ နတ်ရုပ်မြင်သမျှ ချီလိုက်ရတဲ့ လက်အုပ်တွေ...
မင်းကိုနိုင် – “ အမှန်တရားနှင့် အမှားတရံ ”
မင်းကိုနိုင် – “ အမှန်တရားနှင့် အမှားတရံ ” (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅ အလှူပွဲခင်းမှာ ဖိနပ်ချင်း မှားသွားလို့ သူတပါးဖိနပ် ခပ်ကျပ်ကျပ်နဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ ....
မင်းကိုနိုင် – “ ပန်းနုရောင် ဖဲကြိုး ”
မင်းကိုနိုင် – “ ပန်းနုရောင် ဖဲကြိုး ” (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) ဇန်န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၅ ဒီခေတ်ဆောင်းကပါ ဈေးကွက်ဆံချင်လာတယ် ဟိုအရင်လို နှင်းကို မေတ္တာနဲ့ပွဲတောင်းလို့ မရတော့ဘူး . အရာရာကို...
မင်းကိုနိုင် – အလှူပွဲရက် သစ်ပင်တက်ခြင်း (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄ အလှူရက်မှာ ဟိုဘက်ကမ်းက ဂန်းမသားတွေ အလေဏတော အယုတ္တအနတ္တ ထုတ်လွှင့်နေတာ ခုခံမယ် အမှားပြဲ့ပြဲ့ တရားမဲ့တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ....
မင်းကိုနိုင် – သတိတရ
မင်းကိုနိုင် – သတိတရ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ယူပါတယ်) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ထူးချွန်ဆုများလောက် လူစိတ်မ၀င်သားပေမယ့် အသန့်ရှင်းဆုံးအသင်းဟာ တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နာကျင်စရာရှုံးပွဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တွေ့တွေ့ မျက်ရည်စက်လက် ဖက်တွယ်ထား အသင်းနဲ့အတူ...
မင်းကိုနိုင်၊ http://www.facebook.com/MinKoNaingArtist ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃ ပိုးကုန် အချိန်ကုန် စောင်းတီးသင်ဖို့ အခွင့်မကြုံသမျှ ငါတို့လက်တွေ မိုးစက်တွေကို ဆုပ်ကိုင် ကျောင်းခေါင်းလောင်းကို လှုပ်ယမ်းစေနိုင်ခဲ့။ ဂိုးအသွင်းမခံရဖို့အနိုင်ဂိုးဖိသွင်းဖို့ဘောလုံးကွင်းမရှိသေးတော့...